Kianjan’i Malacam: efa anarivony ireo nandalo natao vaksiny - ewa.mg
Kianjan’i Malacam: efa anarivony ireo nandalo natao vaksiny
News - Kianjan’i Malacam: efa anarivony ireo nandalo natao vaksiny
herinandro ny fanaovam-baksiny ho an’ny rehetra etsy
Malacam. Efa anarivony ireo olona tonga
natao vaksiny tao an-toerana, raha ny fanazavana nentin’ny dokotera
Gazety taratra (*): Tao
anatin’ny dimy andro, nanahoana ny fahavitrihan’ny olona tonga
natao vaksiny teto?
Dr Randrianarisoa Angelo
(-): 84 ny olona natao vaksiny teto, tamin’ny andro
voalohany nisokafan’ity toerana fanaovam-baksiny teto Malacam ity
(talata 1 jona). Niakatra tampoka 240 izany, ny alarobia ary 350 ny
alakamisy. Nitombo hatrany izany isan’andro, izay manaporofo fa
mazoto manao vaksiny ny olona eto Antananarivo.
Mizara ekipa dimy ny fandraisana
olona eto Malacam. Manomboka eny amin’ny vavahady izany. Mandalo
amin’ireo ekipa manazava ny mombamomba ny vaksiny ilay olona
raisinay eto ary fanasivanana avy hatrany ireo olona hatao na
tsia…Misy ny fandraketana ny mombamomba ilay olona anaty solosaina.
Aorian’izay, miditra amin’ny toerana fanaovam-baksiny . Mijanona 15
mn amin’ny toerana voatokana hanaraha-maso ny fahasalamany. Omena
toromarika ny amin’ny tokony hatao eny an-dalana sy any an-trano.
Tombohana ny karatra manamarina ny fahavitan’ny vaksiny ary afaka
mody amin’izay ilay olona.
* Iza no tena mazoto manao
– Marobe ny
tanora vao erotrerony tonga manao vaksiny eto. Misy mpianatra
maromaro aza miara-tonga eto ka mahafeno ny fepetra afaka manao
vaksiny dia atao. Midika izany fa mahasarika ny sokajin-taona
rehetra ny fanaovam-baksiny. Eo koa ireo olon-dehibe na
tanora zokiny manodidina ny 40 hatramin’ny 50 taona. Tsy nampoizina
izany satria raha ny olona nokendrena dia ireo efa zokiolona sy
manana aretina mitaiza no tena nentanina tany am-piandohana.
Mahazaka ny vaksiny ny ankamaroan’ny olona tonga teto.
Tahirizina ny anaty vata
fampangatsiahana manaraka ny fenitry ny OMS ny vaksniny. Misy ny
tatitra momba izany isan’andro sy ny fivoarany raha sanatria ka
misy simba ohatra. 640 flacons ny vaksiny tonga omaly. Natao ho
an’olona 10 ny flacons iray.
L’article Kianjan’i Malacam: efa anarivony ireo nandalo natao vaksiny a été récupéré chez Newsmada.
KIANJAN’NY ELGECO PLUS: Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena
Nitombo iray indray ny kianja filalaovana baolina kitra manara-penitra eto Madagasikara. Notokanana tamin’ny fomba ofisialy ny 12 aprily 2019 ny « terrain synthétique » an’ny klioba Elgeco Plus eny amin’ny By Pass Ambohijanaka. Nanatrika izany ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara Rajoelina Andry, ny ministry ny tanora sy ny fanatahanjahantena, Tinoka Roberto niaraka tamin’ireo manam-pahefana isan-tsokajiny. Nambaran’ny filoham-panorina ny klioba Elgeco Plus, Randriamanampisoa Alfred fa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena io kianja io ary afaka mandray lalao baolina kitra iraisam-pirenena. Ahitana trano fisakafoana ihany koa ity foto-drafitr’asa vaovao ity mba ahafahan’ireo mpilalao misakafo. Mbola tsy vita tanteraka ny foto-drafitr’asa fa vao ny kianja iny notokanana iny izay valo volana ny faharetany nanamboarana azy. Ao anatin’ny asa mbola ho atao manaraka ny fanamboarana hotely, ny tribune central ary ny gradin. Tamin’io fotoana io no nametrahana ny vato fototra ho an’ny tribune central ary ny gradin. Roa taona ny fitambaran’ny fotoana hamitàna tanteraka foto-drafitr’asa raha ny vina tany am-boalohany, hoy hatrany Randriamanampisoa Alfred. Ankoatra izany dia mampiavaka ity kianja ity ny fisian’ny “pilone” sy ny “projecteur” mba hanazarana ny mpilalao amin’ny fifaninanana amin’ny alina. Mahazaka mpijery 2000 ny kianjan’ny Elegeco Plus eny By Pass Ambohijanaka. Raha ny fantatra dia ny klioba sy ny mpiara-miombona antoka aminy no niara-nisalahy tamin’ny fanamboarana. Mbola miantso ireo malala-tanana afaka manampy amin’ny famitàna tanteraka ny kianja iray manontolo anefa ny filohan’ny klioba. Lynda A. Cet article KIANJAN’NY ELGECO PLUS: Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena est apparu en premier sur déliremadagascar.
Depiote Razafimanantsoa Hanitra: « Manao kilalao maloto ianareo fa tsy politika intsony… »
Naneho ny alahelony ny depiote Razafimanantsoa Hanitra, tamin’ny alalan’ny tambajotran-serasera, omaly, manoloana ny fiahiahiana ny zanany vavy ho voasaringotra amin’ny zava-mahadolemina. Notazonin’ny mpitandro filaminana sy nohadihadina eny Fiadanana, omaly io zanany io. “Manao lalao maloto ianareo. Tsy politika intsony. Tsy ny zanako vavy no manao politika fa izaho ka tsy misy idirany ny faharesen-dahatro”, hoy izy. Nanteriny fa marary ny reny rehefa kitihina sy potehina ary gadraina amin’ny tsy marina ny sombiniaina. Nahitsy ity depiote sady mpisolovava ity nilaza fa namoronana antontan-taratasy sy nofandrihina ny zanany, saingy tsy maintsy ho tratra ihany ny marina. “Ataonareo takalon’aina izy mba handehanako any hilaminana… Haiko ny zanako fa tsy mifoka ary tsy mitazona sy tsy mivarotra izany izy… Sanatria… Manana ny asany, mpisolovava sy ny toerana misy azy izy ary tia manampy ny hafa. Vitanareo ny mamotika ny fiainany…”,hoy ihany izy. Andrasana ny mety ho tohin’ity raharaha iray hafa ity.Hiady amin’ny jadona sy fanamparam-pahefanaEtsy an-daniny, namoaka fanambara ny antoko Tim, manoloana ny tranga niseho ny asabotsy teo. Nambaran’izy ireo fa voahitsakitsaka ny zon’ny olona noho ny sakana nataon’ny mpitandro filaminana teo amin’ny lafiny fifamoivoizana ka tsy nahafahany namonjy ny alehany na sy nisy hifandraisany amin’ny tatitra akory aza izany. Teo koa ny fisamborana ireo niakanjo mena na tsy nisy soratra ‘’Miara-Manonja’’ aza.Manoloana izany, naka fanapaha-kevitra ny antoko Tim fa hiantso ny vahoaka iray manontolo hiady amin’ny jadona sy ny fanamparam-pahefàna. Manameloka ny famonoan’olona toy ny tany Toamasina sy ny fandatsahan-dra ary ny fisamborana teto Antananarivo. “Helohinay koa ny hazalambo atao amin’ny mpitarika sy ny depiote. Miantso ny fianakaviambe iraisam-pirenena sy ny mpiaro ny zon’olombelona mba hijery akaiky izao toe-draharaha izao. Mitohy ny tolona”, hoy ihany ny fanambarana.Synèse R.L’article Depiote Razafimanantsoa Hanitra: « Manao kilalao maloto ianareo fa tsy politika intsony… » a été récupéré chez Newsmada.
Hentitra amin’ny fomba fiasa ny minisitra Andrianainarivelo Hajo: « Tsy azo ekena ny fanamboaran-dalana kitoatoa sy tsy araka ny fenitra »
Harenina tanteraka ny lalam-pirenena fahenina (RN6). Mialoha izany, nirosoana ny fanamboarana ireo lalana tena ratsy sy simba, hampizotra ny fifamoivoizana. Anton’ny fidinana ifotony nataon’ny minisitry ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy (MATP), Andrianainarivelo Hajo tany Diana sy Sofia izany, ny herinandro teo ary nanomezany toromarika ho an’ny rehetra. Fanadihadiana.Nahitsy ary mazava. « Tsy azo ekena ny fanamboaran-dalana tahaka izao. Tsy nanao ny asa amin’ny tokony ho izy ny orinasa nisahana ny asa ary tsy nisy ny fanaraha-maso », hoy izy tamin’ny fijerena ny ampahan-dalana eo Antanamazava PK 501, distrika Ambanja. Tapaka sy dibo-drano tanteraka izany ary efa nahazo anarana « pisicine » na dobo filomanosana, saingy izao niditra an-tsehatra avy hatrany izao ny MATP. Nanteriny fa manify ny hatevin’ny lalana. Tsy araka ny fenitra ny vato nampiasaina. Tahaka izany koa ny fangaro tamin’ireo akora ka tsy nampaharitra ny lalana, 10 taona mahery aty aoriana nefa nindramana vola tamin’ny mpamatsy vola. Tsy voahaja koa ny bokin’andraikitra, araka ny nambarany. Noraisiny ho ohatra ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo ny amin’ny tsy maintsy hanarahana ny fenitra. Nohatevenina ny firafitry ny lalana ary tsy maintsy ho tahaka izany avokoa ireo fanamboarana fotodrafitrasa rehetra.Notsindriny fa ezahina ny tsy hahatapaka ny lalana sy hitohizan’ny fifamoivoizana RN6 miainga eo Ambondromamy hatrany Antsiranana. Nambaran’ny minisitra fa efa nisy ny tolobidy amin’ny hanarenana tanteraka ny RN6 ka miandry ny orinasa madio, tsy tafiditry ny resaka kolikoly hanao izany, miaraka amin’ny mpamatsy vola Banky Eoropeanina misahana fampiasam-bola (BEI).Tsy an-kiandrinadry fa niroso amin’ny fanamboarana ireo ampahan-dalana tena simba « point noir » ny MATP. « Noesorina ny akora teo ambany ary soloina vaovao manaraka ny fenitra takin’ny mpamatsy vola, BEI. Ezahina hovitaina anatin’ny telo volana ny asa vonjimaika sy hamehana eto », hoy ny mpiandraikitra ny tetikasa, Ralaimanana Rija. Mizara roa ny tetikasa, ahitana ny “lot” Ambanja mihazo an’Ambilobe ary miainga eo indray hatrany Antsiranana.L’article Hentitra amin’ny fomba fiasa ny minisitra Andrianainarivelo Hajo: « Tsy azo ekena ny fanamboaran-dalana kitoatoa sy tsy araka ny fenitra » a été récupéré chez Newsmada.
Voarohirohy ho mpisoloky olona amin’ny fivarotana merikiora hosoka ity lehilahy iray voasambotry ny polisy, tany Ambavahadimangatsiaka Antsirabe, tamin’ny alatsinainy lasa teo. Tao amina trano fandraisam-bahiny iray no nahatrarana azy. Mbola nahitana merikiora hosoka teny aminy. L’article Fisolokiana est apparu en premier sur AoRaha.
«Pôetawebs» misehatra: hampahafantatra an’i Clarisse A. Ratsifandrihamanana
Mpanoratra manana ny mampiavaka azy. Goavana rahateo ny asa soratra vitany ho an’ny taranaka aty aoriana. Iza moa i Clarisse Andriamampandry Ratsifandrihamanana? Hiezaka hamaly io fanontaniana io i Lila sy i Lisy.Hotanterahina, ny 17 marsa izao ao amin’ny Tranombokim-pirenena Ampefiloha, ny « Pôetawebs misehatra ». Hizara roa ny fandaharam-potoana. Fizarana voalohany, « Tapatapakahitra » hamalian’ny poeta Nirihaja ireo fanontanian’i Fafah Rakotondrantsimba sy ny mpijery. Hovaliny amin’izany ny fanontaniana momba azy sy ny vehivavy ary ny poeta vehivavy. Hisy antsa sy hira ihany koa hoentiny eny an-tsehatra amin’io tapany voalohany io.Fizarana faharoa, « Sorapiainana » hitantarana sy hanazavana ny sora-piainan’i Clarisse Andriamampandry Ratsifandrihamanana. Ny “Pôetawebs” no hamintina izay efa nivoaka tao amin’ny tranonkalam-pifandraisana. Ambonin’izay, hanatevina ny fanazavana ny zanak’i Clarisse Andriamampandry Ratsifandrihamanana, i Lila sy i Lisy. Hamaly ny fanontanian’ny mpanatrika ihany koa izy mirahavavy. Ankoatra ireo, hanolotra boky biografia matevina ihany koa ry zareo sady hiantsa tononkalo sy hihira ary haneho ranty.Marihina fa tafiditra ao anatin’ny fandaharam-pianarana ny sanganasan’ity andrarezin’ny asa soratra ity. Anisan’ny nahatonga ny mpikarakara hanasa mpianatra sy mpikaroka ho tonga maro ao amin’ny efitrano Dox, ny 17 marsa izao manomboka amin’ny 2 ora tolakandro.HaRy Razafindrakoto L’article «Pôetawebs» misehatra: hampahafantatra an’i Clarisse A. Ratsifandrihamanana a été récupéré chez Newsmada.